Bypass Valve ဖြင့်ရေနွေးငွေ့ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ Bypass Valve ဖြင့်ရေနွေးငွေ့ အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Taiwan, HUAI-AN HARDWARE CO., LTD.၏တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Bypass Valve ဖြင့်ရေနွေးငွေ့ ထုတ်ကုန်လိုင်းများကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာဈေးကွက်တင်ရောင်းချနှင့်နိုင်ငံခြားတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ရောင်းချကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးနဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်စံချိန်စံညွှန်းမှာထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဆက်လက်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သင့်သည်ပညာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်ဖြစ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချီတုံချတုံမ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အဖြစ်မကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်!
ပုံစံ - CAST IRON No. 981K~995K
DSC CAST IRON INVERT BUCKET STEAM ထောင်ချောက်အား BYPASS Valve နှင့်အတူ
●MOP 17K x ကို 230̊ဂ.
●DSC INVERTED BUCKET Steam ထောင်ချောက်များသည်သာလွန်ထူးကဲသောအရည်အသွေးနှင့်တာရှည်ခံခြင်းအသက်တာ၏ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။.
●BYPASS Valve သည်အလုပ်ချိန်ကိုသက်သာစေရန် TRAP CAP တွင်အင်ဂျင်နီယာအသစ်များဖြစ်သည်,fittings,နေရာမှအကွာအဝေးနှင့်ဖြစ်နိုင်သောယိုစိမ့်မှု.
●ဒီဇိုင်းအသစ်သည်တစ်ခုတည်းတွင်ပြီးပြည့်စုံသောအ ၀ င်အထွက်ခလရထောင်ချောက်နှင့်အတိုင်ပင်ခံအဆို့ရှင်၏ကောင်းမွန်သောလက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။.
●ရွေးချယ်မှု Theme Connector သို့မဟုတ်မှုတ် Valve ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်,မှာယူပါ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/steam-trap-with-bypass-valve.html
အကောင်းဆုံး Bypass Valve ဖြင့်ရေနွေးငွေ့ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် Bypass Valve ဖြင့်ရေနွေးငွေ့ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ Bypass Valve ဖြင့်ရေနွေးငွေ့ ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
DSC STAINLESS သံမဏိပါ ၀ င်သောအင်ကြင်းပိုက်ပါပိုက်ထောင်ချောက်များမဟုတ်ဘူး.701,771,741 ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP, ●ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 30K 425 x ကို̊ဂ. ●ဝတ်ဆင်ရန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ခံနိုင်ရည်အတွက်အကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●DIRT နှင့် PURGE SYSTEM ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်. ●LOWAD ကို AT အသေးစား dribb,အလင်းနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း,Full Load ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်. ●နောက်ခံဖိအားကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု. ●အအေးFORရိယာကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်. ●CONDENSATE ပက်ကျိများမှချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှု. ●မဟုတ်ဘူး.771,772 Steam Trap သည် VERTICAL OR HORIZONTAL INSTALLAZZJONI အတွက်ရရှိနိုင်သည်. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.701~706F